यिनै हुन् जसलाई २२ वर्षकै कलिलो उमेरमा ३ वर्ष अघि मात्र प्रेम बिबाह गरि ल्याएका श्रीमानले ….. – Ramailo Sandesh
काठमाण्डौ । ‘सुम्निमा हराई ! खोजी गरिरहेको छु,’ सोनाम लामाले केही दिन अघि ससुरालीमा फोन गरेर जानकारी गराए । छोरी हराई भन्दा सुम्निमाका तनहुँ बन्दीपुरस्थित माइतीतर्फको परिवारको मनमा चीसो पस्यो । उनीहरुले ज्वाईंलाई कतै केही त गरेको होइन ? भनी सोधे । सोनाम अकमकिएर खोजी गरिरहेको जानकारी दिए । काभ्रे घर भएका सोनामले सुनकोशीमा फाल हालेको हुनसक्ने भएकाले खोजी गरिरहेको सुनाए ।
पुनः एक्कासी ह्वातै घट्यो कुखुराको मासुको मुल्य